galmudugnews.com » Deg-deg: Melez Zenawi oo geeriyooday Home About
Home » WARARKA » Deg-deg: Melez Zenawi oo geeriyooday Deg-deg: Melez Zenawi oo geeriyooday galmudug on
Aug 21st, 2012 //
No Comment Views 16375Ra’iisul wasaarihii ee dalka Ethiopia Melez Zenawi ayaa lagu soo warramayaa in uu geeriyooday xalay kaddib markii si rasmi ah u shaacisay dowladda Ethiopia, iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar la xiriira caafimadkiisa.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay telefishinka Ethiopia in Zenawi uu geeriyooday xalay wax yar ka hor lixda saac ee habeennimo.
Zenawi ayaan ka soo hormuuqan dhowr toddobaad warbaahinta, sidoo kale ma uusan ka qeybgelin kulankii Midowga Afrika ee bishii hore ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia.
Melez Zanawi oo ku dhintay da’da 57 jirka ayaa warar kula duwan sheegaya in uu ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla magaalada Brusleless ee dalka Belgium halka kuwa kale ay leeyihiin dalka Germany.
Hailmariam Desalegn oo ah ra’iisul wasaare ku-xigeen ayaa si kumeel gaar ah u sii hayn doono xilka ra’iisul wasaarannimo dalka Ethiopia.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21021 hitsContact US - 19681 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15793 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15506 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13964 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13919 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13832 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13750 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11837 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11804 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11753 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11539 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11510 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11367 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11267 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11092 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11066 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10895 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10538 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10381 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10365 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10073 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10035 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9795 hits Home About